Kurambidza Referral Spam neSemalt Expert
Mhando dzose dzekutumira spam, botshu uye tsandanyama dzinofarira kushandisa sese yako nzvimbo uye WordPress websites nekuda kwezvikonzero zvega. Zvinotaridzika sevanyori vanogara vachishingaira mukunyengera webmasters uye kutsvaga injini s neimwe nzira kana imwe. Spam inoda nzvimbo dzakawanda dzewebhu, asi iwe unogona kunge usingadi kuvarega vachikuvadza bhizinesi rako. Kana iwe uine WordPress website, unofanirwa kubvisa kutumira spam, spiders uye bots nekukurumidza.
Andrew Dyhan, anonzi Semalt nyanzvi, anotsanangura kuti kutumira spam ndeye rudzi rwe spam runobata blogger uye mawebsite eWebsite yePressPress nenhamba huru. Uyezve, inopinda muGoogle Analytics account uye inotanga kuitsvaga yako injini. Nokudaro, kudzivisa kutumira spam kunosungirwa kana uchida kukura bhizimusi rako paIndaneti - pictures of graph.
Nheyo yeReferrer Spam
Referral spam zvinangwa zvose mawebsite neGoogle Analytics nhoroondo. Kwemwedzi inoverengeka, yava dambudziko guru kune webmasters. Kuburikidza neIndaneti dzisina kururama, vatengesi vanotumira masayiti ako pasi-kutengesa chitima, uye mikana yako yekudziviswa nemajini ekutsva akakwirira..
Bvisa Referral Spam muShokoPress Websites
Unofanirwa kubvisa kutumira spam kwete chete mubhuku rako reGoogle Analytics asiwo muWebsite WordPress. Aya matanho anotevera anokosha munyaya iyi:
Kuiswa kweReferenti Spam Plugins
Unogona kutanga chirongwa nekuisa mapepa maviri ekutsvaga spam plugins pane yako WordPress websites. Nhamba huru yemapulagiyona inowanika paIndaneti. Kana zvakadaro, iwe hauna kuwana ipakiti yakadai paShokoPress pachayo; iwe unogona kuzvitsvaga kubva kune chinyorwa chakatendeka uye chichiita kuti chiiswe panzvimbo yako. Sucuri, Spamreferralblock, WP kuburitsa kutsvaga spam, uye mamwe ma plugins anogona kuedzwa munyaya iyi. Zvose zvavo vanoona kutumira kwepamu uye vanobvisa kubva panzvimbo dzenyu mumasekondi.
Kana wangoisa purogiyona, danho rinotevera nderokugadzirisa zvirongwa zveShoko rako rePepa. Iwe haufaniri kukanganwa kushandura plugin musati wapedza firati. Chinangwa ndechekuvimbisa kuti kutumira kwose kwepamu uye bhodzi dziri kubviswa uye kudzivirirwa zuva rega rega, saka iwe unofanira kuchengetedza maitiro uye ugadzirise iyo chero ipi zvayo inoda.
Tsvaga Zvesva Zvekare Mhinduro uye Dzai Zvimwe Zvigadzirwa
Nzira yechitatu uye imwe yenzira ine simba ndeyekutarisa zvinyorwa zvitsva pane WordPress yako yepaiti uye kugadzira zvigadziro zvekuchengetedza kana zvichidikanwa. Izvi zvinodzivisa kuuya kwekutumira spam, tsanduki, uye bots, uye kunovimbisa kuchengetedzwa kwewebsite yako kusvika pamwero mukuru. Iwe unofanirwa kugara uine ziso pamazano akavandudzwa uye mazano anopiwa neShokoPress. Chengetai kana mamwe mapurgins matsva ataurwa mumazuva mashomanana apfuura. Iwe unofanidza kuedza ma plugins chete kana iwe uchivimbiswa kuti vanhu vazhinji vatovaedza.
Tarisa Mazita eZvivhurwa Mazita
Kana matanho ari pamusoro apa apera, danho rekupedzisira nderokuona urongwa hwemasimba akavharidzirwa uye subdomains kuti ave nepfungwa yekuti nzvimbo dzipi dzakagamuchira maonero akawanda ekunyepera. Kuti uone runyoro rwakakwana, iwe unofanira kuenda kuGoogle Analytics account uye chengetedza zvinyorwa ipapo.